विचार ब्लग || Radio Nayakarnali
समाचार - विचार ब्लग
हिसिला कसरी बनिन् भ्रष्टाचारी ?
बाबुराम र हिसिलाको अन्तरसम्बन्धको कथा २०७२ चैत १५ गते रेडियो नयाँ कर्णाली छोटो कपाल । त्यो पनि अधिकांश फुलेको । निधारमाथिको बीचभागमा सिउँदो पारिएको । बढ्दै गरेको सेतो कपालले कालो मेहेन्दी लगाएको प्रष्टै छुट्याउँथ्यो । कोट-पाइन्टमा छालाको जुत्ता । पछाडिबाट हेर्दा लाग्थ्यो,
चारबुँदेमा फसेको भारत र मधेसमा महागठबन्धनको सकस
ओलीलाई दिल्ली बोलाउने भारतीय 'रोडम्याप' के हो ? २०७२ फागुन ३ रेडियो नयाँ कर्णाली मधेसको समस्या सीमांकन हो। समस्या समाधानको बिकल्प समितिरउपसमिति मार्फतको प्रस्ताव पनि भारतीय पक्षसँग भेटेर कमल थापाजीले नेपाल ल्याएको ४ बुंदे मार्फत हो। तर, त्यो पनि जारी मधेस असन्तुष्टिको
अर्घाखाँचीको चुनढुंगामा किन हुँदैछ लफडा ?
नेतालाई चन्दा, स्थानीयलाई पर्यावरणको चिन्ता ! २०७२ माघ २० रेडियो नयाँ कर्णाली अर्घाखाँचीको चुनढुंगा विवाद फेरि चर्चामा आएको छ । ०६८ कात्तिक १८ गतेदेखि स्थगन गरिएको चुनढुंगा उत्खनन पुनः सुचारु गर्न उद्योग मन्त्रालयले र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन गृह मन्त्रालयले हालै जिल्ला
भन्छिन्-'नेपाली नायिकाहरुमा ग्रुपिजम धेरै छ' चलचित्र ‘नाई नभन्नु ल २’बाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा भित्रिएकी नायिका हुन्, बर्षा सिवाकोटी । चलचित्र भन्दा धेरै म्यूजिक भिडियोमा देखिएकी उनी अब भने ठूलो पर्दामा नै जम्ने बताउँछिन् । अनलाइनखबरका लागि विजय सुवेदी ‘आवाज’सँग कुरा गर्दै
भारतसँगको यो युद्ध कसरी हार्ने ?
एउटा कथाबाट शुरु गरौं । कुनै सामन्त वा मुखियाले आफ्नो घरमा बसेको हलिया/कम्लरीलाई काम बिगारेको निहुँमा गाली गर्दै लात्तैलात्ताले हिर्काउँदोरहेछ । हिर्काउने मात्र होइन, त्यसको अनुहारभरि थुकी पनि दिँदोरहेछ । आफ्नो सानोतिनो गल्तीमा पनि आफूमाथि अत्याचार गर्ने मालिकको रौद्र रुप देखेर
कहिले मेटिएलान पीडाका डोवहरु ?
“मलाई पक्राउ गरेर सेनाको क्याम्पमा राखेका बखत नितम्ब र यौनाङ्गमा लात्तिले हान्थे । रातको समयमा सुरक्षाकर्मीहरु मलाई राखेको कोठामा आई नङ्गमा सियो रोप्थे र अपशब्द बोल्थे । मेरो हात गोडामा लगाएको नेल खोल्थे, लुगा खोलिदिएर नाङ्गै बनाउथे । तर, चिन्न
राजतन्त्र फर्काउन जनता सडकमा उत्रिनेवाला छन्’
शिवसेना नेपाल घोषितरुपमा हिन्दुवादी र राजावादी पार्टी हो । ०४७ सालमा संस्थाको रुपमा जन्मेको यो संगठनले ०५७ सालमा पार्टीको रुप लिएको थियो । ‘धार्मिक नीतिभित्र रहेर राजनीति गर्ने’ उद्देश्य राखेको पार्टीले यसबीचमा अपेक्षित प्रगति भने गर्न सकेको छैन । भारतमा रहेको